people Nepal » किन खानु हुँदैन पोलेको मासु ? चिकित्सक के भन्छ्न ? किन खानु हुँदैन पोलेको मासु ? चिकित्सक के भन्छ्न ? – people Nepal
किन खानु हुँदैन पोलेको मासु ? चिकित्सक के भन्छ्न ?
हामी मासुका विभिन्न परिकार बनाउने क्रममा धेरै पोलेको र भुटेको मासु रुचाउने गर्छौ । त्यस्ता मासुबाट क्यान्सरको खतरा हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।